Covid 19- Ho henjana ny fepetra fihibohana an’Analamanga: 6 ny maty, 429 no voa ny faran’ny herinandro | NewsMada
Niakatra be ny tahan’ireo nifindran’ny valanaretina sy ireo matin’ny Covid 19, ny faran’ny herinandro teo. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny fanjakana hamerina ny fihibohana tanteraka ho an’ny faritra Analamanga. Ho hentitra ny fampanarahana ny fepetra!
Tsy latsaky ny 200 intsony ny tranga vaovao. Miisa 216 ireo nifindran’ny valanaretina tao anatin’ny roa andro farany. Niampy 213 izany, omaly, ka tafakatra 429 izy ireo tao anatin’ny telo andro. Tsy vitan’izany fa miisa enina ireo namoy ny ainy tao anatin’izany. Avy eto Analamanga avokoa ny 406 amin’ireo 429 nifindran’ny valanaretina ireo. Avy any amin’ny faritra Vakinankaratra, i Matsiatra Ambony, Atsinanana ary i Moramanga ny ambiny.
Miisa 32 ireo namoy ny ainy
Etsy andaniny, mbola misy 33 ny isan’ireo ahina mafy ny toe-pahasalamany, omaly, ka avy eto Analamanga avokoa ny maro amin’izy ireo: i Belefatanana, Anosiala ary ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka.
Na izany aza, miisa 51 ny fitambaran’ireo sitrana tao anatin’ny telo andro farany ka 1 108 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 1 801 ireo mbola arahi-maso ny toe-pahasalamany raha 2 941 ireo efa tratran’ny Coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Miisa 32 kosa ireo efa namoy ny ainy ka 14 amin’ireo, maty tao anatin’ny fito andro.
Olona iray ihany no mivoaka
Manoloana ireo rehetra ireo, nivory tamin’ny alalan’ny « visio-conference » ny eo anivon’ny filankevitry ny minisitra, ny asabotsy teo. Tapaka tamin’izany fa haverina ny fihibohana ho an’ny faritra Analamanga, mandritra ny 15 andro, manomboka anio alatsinainy 6 jolay izao ka hatramin’ny alatsinainy 20 jolay. « Tsy azo ivezivezena na mivoaka na miditra ato anatin’ny faritra Analamanga. Misokatra mandritra ny tontolon’ny andro ny fivarotam-panafody rehetra. Misokatra ireo toerana fivarotana ny zavatra ilaina andavanandro ka olona iray ihany isan-tokantrano no mahazo mivoaka amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 12 ora antoandro ihany », hoy ny fanambarana.
Ny taxi ihany no miasa…
Ny fiarakaretsaka na ny taxi ihany sisa miasa, hahafahana mitondra ny marary na mamonjy toeram-pivarotam-panafody na toeram-pitsaboana. Olona telo ihany no entiny, mampiasa ny «gel» ary tsy maintsy manao famendrahana fanafody « désinfection » isan’andro.
Etsy andaniny, foana avokoa ny fanomezan-dalana manokana rehetra, ary tsy misy olona mahazo intsony fahazoan-dàlana na iza na iza. Mahazo mivezivezy ny fiara mpitatitra entana.
Ankoatra izany, miato avokoa ny fampianarana rehetra eto amin’ny faritra Analamanga. « Holazaina amin’ny fotoana manaraka ny daty hanaovana ny fanadinana. Mbola mihatra avokoa ireo fepetra rehetra teo aloha ankoatra ireo », hoy ny filankevitry ny minisitra.